Dowladda Federaalka oo ku howlan xalinta khilaafka ka taagan dhismaha Galmudug loo dhan yahay |
Galmudug (NogobNews) 18/10/2019
Degmada Dhuusa-Mareeb waxaa wali ka soconaya kulamo kala duwan oo lagu xalinayo khilaaf ka dhashay guddi farsamo oo ay dowladdu u magacaawday dhismaha Galmudug oo ay ka biyo-diidan yihiin mas’uuliyiinta sare ee maamulka Ahlu Sunna.
Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in ay tagaan degmada Dhuusa-Mareeb wafdi ka socda dowladda Federaalka kuwaa oo halkaa ka bilaabi doona wada hadalo lagu xalinayo tabashada Ahlu Sunna.
Qoraal dhawaan ka soo baxay Ahlu Sunna Waljameeca ayaa lagu sheegay magacaabista guddigaa aan wax watashi ah dhankooda lagala sameyn, islamarkaana aan loo marin dariiqaa saxda ah, taasoo keentay in uu hakad ku yimaado guda-galista howlihii loo idmaday guddiga.
afdiga dowladda Soomaaliya ee tagaya Dhuusa-Mareeb ayaa lagu wadaa in ay Ahlu Sunna isla meeldhigaan xal u helida khilaafka ka dhashay diidamda Ahlu Sunna ee Guddiga farsamada oo ay magacaawday Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka.
Madaxweynaha maamulka Galmudug ee waqtigu ka dhamaaday Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa dhankiisa oo dhaweeyay guddiga oo sida uu hadalka u dhigay dowladda kala tashatay ka hor inta aysan soo magacaabin.
Horay sidan oo kale waxaa dhowr dib u dhacay shirkii dib-u-heshiisiinta beelaha ku soo dhamaaday Dhuusa-Mareeb, balse markii danbe lagu guuleystay in la qabto kaddib markii la xaliyay khilaaf ka dhashay habka loo maamulayo shirka.